China Reusable Lunch Bag gwara mmanụ Lunch Box Canvas Fabric with Aluminium Foil, Lunch Tote Handbag for Women, Men, School, Office Manufacture and Factory | Onye Ọchụchọ Ọhụrụ
Reusable Lunch Bag gwara mmanụ Lunch Box Canvas Fabric with Aluminium Foil, Lunch Tote Akpa maka Women, Men, School, Office
Ogo (mm): 211 * 165 * 266mm
Agba: Agba ọ bụla pantone
FOB ego: $ 2.10- $ 2.40
Oge Mbuga ozi: Ihe dị ka ụbọchị 40-60
IHE: Super gwara mmanụ n'ime thickened EPE ụfụfụ + aluminum foil nwere ike na-nri gị anọ na-ekpo ọkụ / oyi / ọhụrụ ruo ọtụtụ awa, waterproof, mfe ọcha BPA free. Anyị na-emezi Velcro ochie ka ọ dị elu na nko na gburugburu Velcro ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
SAFE & REUSABLE: Nke a nri ehihie akpa bụ nri-mma, 100% na-abụghị na-egbu egbu, keguru mmiri àmà, abrasive-eguzogide ọgwụ na mgbochi corroding, nke na-enye gị a na-adịgide adịgide use.Besides, ọ e mere na a n'ime akpa maka itinye igodo, ekwentị, kaadị ma ọ bụ obere akpa gị.
Nnukwu ikike: Dimension: 8.3Lx6.5Wx10.5H sentimita asatọ, na kwalite ogologo handle.This nri ehihie Tote dị ukwuu maka mbukota nnukwu ichekwa nri, ọbụna nwere ike ịnwe dum ụbọchị nri na ị chọrọ, adabara ọrụ, n'èzí na-eji kwa ụbọchị.
MULTIFUNCTIONAL: Nke a reusable kwaaji Tote akpa na-enye mara mma na dị fechaa ngwọta ọtụtụ nchekwa mkpa. Ọ bụ ụzọ ejiji iji buru nri, nri, ihe ọveraụveraụ, ihe ọ drinksụ drinksụ maka ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke na ụmụaka, ma ọ bụ jiri ya dịka akpa ego na-ejide.
-Durara aluminum ikpuchi mkpuchi nke dị mfe ọcha na BPA n'efu.
-Extra thicken EPE ụdị mkpuchi na-eme ka nri dị jụụ ma dị ọhụrụ.
-Roomy iji jide karama mmiri, otu ma ọ bụ arịa abụọ tinyere mkpụrụ osisi ole na ole.
- Enyere ya na nchekwa nchekwa dị n'ime maka itinye kaadị gị, ekwentị, obere akpa na igodo.
Multi-ọtọ Tote akpa
Zọ ejiji eji ebu nri, nri, ihe ọ ,ụveraụ, ihe ọ drinksụ drinksụ, bụkwa onyinye zuru oke maka ndị okenye, ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke, ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke!
- Mee nhazi nri gị ka ọ dị mfe ma belata ndụ ahụike gị kwa ụbọchị site ugbu a gawa.
-Ebe a nkecha ụkpụrụ, na HOMESPON nri ehihie akpa e mere na-a ga-enwe Voteatote tote.
-Material: Owu & Aluminom mkpuchi udidi
-Size: 8.3Lx6.5Wx10.5H sentimita asatọ
-Two obosara sturdy owu ebu straps ekwe ka akpa na-eyi na ogwe aka ma ọ bụ na aka, ị ga-enwe ike-abịa ma na-ebu a mma nri ehihie n'ebe ọ bụla ị na-aga.
Nke gara aga: Egwuregwu Tennis Egwuregwu Tennis buru ibu maka Womenmụ nwanyị na Menmụ nwoke ijide Tenis Tennis, Pickleball Paddles, Badminton Racquet, Squash Racquet, Bọọlụ na Ngwa Ndị Ọzọ
Osote: nnukwu azu paaki N'èzí Sports Bag 3P Military Tactical Bags For Hiking Camping Climbing Waterproof Wear-resisting Nailan Bag
Kids gwara mmanụ Lunch Bag for Boys and Girls, Lu ...
Peeji Peeji nke eji enyere mmadu aka ...
Gwara mmanụ Lunch Box Bag kpaliri Nri Prep Coo ...
Reusable Lunch Bag na Kemwepu Jirinụ Str ...
Large Lunch Bag gwara mmanụ Lunch Box Soft Soft Cooler ...
Premium Lunch Box, gwara mmanụ Lunch Bag maka Men ...